RW Cumar Cabdirashiid iyo Bulshada Rayidka ah ee Gobolka Mudug oo Arimo muhiim ah ka wada Hadlay – Radio Daljir
RW Cumar Cabdirashiid iyo Bulshada Rayidka ah ee Gobolka Mudug oo Arimo muhiim ah ka wada Hadlay
Luulyo 21, 2015 2:13 b 0
Talaado, Luuliyo 21, 2015 (Daljir) —Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa kulan la qaatay Odaayasha dhaqanka, qeybaha bulshada Rayidka iyo Maamulka gobolka Mudug ee Puntland, isaga oo la tashi kala sameeyay xaaladda dalka warbixinna ka siiyey halka xaalada dalku marayso, gaar ahaan qorshaha dowladda Soomaaliya ee deegaanada gobolka Mudug. Waxana kulanka goobjoob ahaa xubno ka socday labada gole ee dowladda iyo Wasiiro ka tirsan Maamulka Puntland.
Ra’iisul Wasaaraha XFS ka dhageystay bulshada Gaalkacyo mowqifkooda ku aadan arrimaha Maamulka gobolka Mudug, isagoo si cad u sheegay in dowladda Soomaliya mar walba ay ka shaqaynayso isku soo dhaweynta dadka walaalaha ah ee dagan gobolka Mudug, kuwaas oo ka dhexeyso wada dhalasho iyo dhaqan soo jireen ah.
“Dadka ku dhaqan gobolka Mudug, gaar ahaan degmada Gaalkacyo waa dad walaalo ah oo weligoodba wada deganaa, hal meelna wax ku wada qeybsan jiray, waxaana loo baahan yahay in la soo celiyo walaalnimadii, iskaashigii iyo wax wada qabsigii aad caanka ku aheydeen” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha oo dhanka kale xusay in dawladda Federaalku ay ku taageereyso sidii loo gaarsiin lahaa dib-u-heshiisiinta gobol, degmo illaa tuulo.
Dhanka kale R/W Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa gelinkii danbe ee maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, waxana kusoo dhaweeyey garoonka Diyaaradaha Muqdisho, Masuuliyiin kamid ah labada gole ee dowladda, Siyaasiyiin iyo masuuliyiin kale.
DHAGAYSO: Barnaamijkii Saaka iyo Dunida_Talaado_21